I-America's Lawn Addiction - Isikhungo se-EcoTechnology
Ahh entwasahlobo! Ngemuva kobusika obude obubandayo ekugcineni sekuba mnandi ngokwanele ukuphuma ezindlini zethu ngaphandle kwejazi, amagilavu, isigqoko, isikhafu okuhlanganisiwe abaningi bethu abakwazi kahle.
Intwasahlobo yisikhathi sokuhamba, amapikiniki, nemidlalo yangaphandle, nakwabaningi baseMelika, sekuyisikhathi futhi sokuhlwanyela imbewu yotshani, umanyolo, umbulali wokhula, nomshini wokugunda utshani. Ukukhulisa utshani obuluhlaza okotshani kuthatha umsebenzi.
Bangu ngaphezu kwamahektare ayizigidi ezingama-40ivula ifayela le-PDF yotshani obenziwe ngomuntu e-United States, iningi lazo lingatholakala emagcekeni asezindaweni ezisemadolobheni. Utshani obuluhlaza obugcinwe kahle, obubukeke kahle bubukeka bujabulisa ngempela futhi buzwakala buhle ukulala, kepha ngaphandle kwalezi zinzuzo ezimbili, akusebenzi ngempela kunoma iyiphi injongo yokusebenza, futhi empeleni kunamaphutha amaningi.
Ake siqale ngokusetshenziswa kwamandla.
Ukugcina utshani obukeka bunempilo kudinga ukugundwa masonto onke noma kabili ngeviki futhi abanikazi abaningi botshani benza lo mkhuba ngomshini wokugunda utshani ophehlwa ugesi. Le mishini ayisebenzi kahle (kukhipha ihora elilodwa lokugunda utshani izikhathi 11ivula ifayela le-PDF inani lokungcola kwemoto entsha) kanye ne-guzzle ezungeze Amamitha ayizigidi ezingu-200ivula ifayela le-PDF kaphethiloli ngonyaka e-US
Ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla okungadingekile kuyindlela enhle yokwenza konga amandla ekhaya.
Utshani bumosha ngendlela emangalisayo. Ngokuya nge- iphephaivula ifayela le-PDF ethunyelwe yi UMkhandlu Kazwelonke Wezokuvikela (NRDC) ngo-2016, ukuchelelwa komhlaba wonke ngotshani obungu-turf kwafinyelela cishe amalitha ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisishiyagalolunye zamanzi ngosuku, kanti ukusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane okuhlobene notshani kwaba ngaphezu kwamaphawundi ayizigidi ezingama-9 (okungenza futhi kudale ukugeleza okuyingozi okungcolisa amachibi nemifula).
Ukunakekelwa kotshani kudala nemfucuza eminingi epulasitiki evela ezikhwameni zembewu kanye nomanyolo. Ukunciphisa izinto zakho ezihlobene notshani nokusetshenziswa kwemithombo kuyindlela enhle yokwenza ukunciphisa imfucuza ekhaya.
Ukushona okukhulu kotshani be-monocrop okumanzi ngemithi yokubulala izinambuzane nakho kungaba yinto ebangela ukwehla kwezinambuzane zendawo nezilwane zasendle, kufaka phakathi izinyosi.
Inani lezinyosi laseMelika lithathe ukuntywila emakhaleni eminyakeni yamuva, ikakhulu ngenxa ye- o-P abathathu, ukungondleki kahle, izibulala-zinambuzane nezinambuzane. Izinyosi, njengabantu, zidinga ukudla okwahlukahlukene ukuze ziphile impilo enempilo, kepha izinhlobonhlobo ezicebile zezimbali neminye imithombo yempova kunzima kakhulu ukuthi izinyosi zikuthole edolobheni lethu elikhulayo, utshani obuthambekele otshanini.
Ama-pesticides amaningi ajwayelekile otshani, kufaka phakathi i-glyphosate, isithako esiyinhloko eRoundup, akhonjisiwe ukubulala izinyosi
Ngaphezu kwalokho, izibulala-zinambuzane eziningi ezivamile, kufaka phakathi i-glyphosate, indawo eyinhloko eRoundup (isibulala-zinambuzane esidumile saseMonsanto) kukhonjiswe ukuthi zibulala izinyosi.
Intshani yotshani ejwayelekile iyingozi futhi kumasistimu wamanzi endawo. Kanye nomuthi wokubulala izinambuzane ophelelwa yilawa otshanini obenziwe ngotshani obenziwe ngamanzi, awabambi noma ahlunge amanzi angcoliswe kweminye imithombo.
Ngokuvumelana ne amanzi angaphansi komhlaba.org, “Njalo uma lina, amanzi abaleka ezindaweni ezingangeneki, njengophahla noma izindlela ezihamba ngemoto, eqoqa ukungcola okunjengezinhlayiya zenhlabathi, umanyolo, amakhemikhali, uwoyela, udoti, kanye namagciwane asendleleni. Amanzi agcwele ukungcola angena emiseleni yesiphepho engalashwa futhi agelezela ngqo emifudlaneni nasemachibini aseduze. I-EPA yase-US ilinganisela ukuthi ukungcola okuphathwa amanzi emvula kubalelwa ku-70% wakho konke ukungcola kwamanzi. ”
Ukungcoliswa kwamanzi nokugeleza kwamanzi kuyizinkinga ezinkulu ezindaweni eziningi ezisemadolobheni, kanti utshani obuluhlaza bandisa izingqinamba.
Ngakho-ke, uma utshani botshani be-turf budala umonakalo omkhulu ezilwaneni zasendle nasemvelweni futhi kungasebenzi noma yimuphi umsebenzi noma inhloso ngaphezu kwe-aesthetics kungani utshani be-turf buyindawo yamayadi amaningi asemadolobheni? Kuvelaphi lokhu kukhathazeka?
USolwazi nesazi-mlando u-Yuval Noah Harari usinikeza impendulo engaba khona ngokubheka umlando wotshani encwadini yakhe yango-2015, UHomo Deus.
Ngokusho kukaHarari, “Umqondo wokondla utshani emnyango wezindawo zokuhlala ezizimele kanye nezakhiwo zomphakathi wazalelwa ezinqabeni zezikhulu zaseFrance naseNgilandi eminyakeni yobudala ephakathi. Ekuqaleni kweminyaka yesimanje lo mkhuba washaya izimpande ezijulile, futhi waba uphawu lokuhweba lwezicukuthwane.
Utshani obugcinwe kahle babufuna umhlaba nomsebenzi omningi, ikakhulukazi ezinsukwini ezingaphambi koshayamshini nabafafaza amanzi ngokuzenzakalela. Ngokushintshanisa, azikhiqizi lutho lwenani. Awukwazi ngisho nokudla izilwane kuzo, ngoba zazidla futhi zinyathele utshani.
Utshani obenziwe kahle baseVersailles (osesithombeni lapha) nezinye izinqaba, izigodlo, nezithabathaba zezicukuthwane kwakuyizandulela zotshani banamuhla
Abampofu abampofu babengenakukwazi ukuchitha isikhathi esiyigugu noma umhlaba otshanini. I-turf ecocekile esangweni lama-chateaux bekuwuphawu lwesimo okungekho muntu ongayikhohlisa.
Ngaleyo ndlela abantu bafika bakhomba utshani ngamandla ezombusazwe, isimo senhlalo kanye nengcebo yezomnotho. Akumangalisi ukuthi ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye onxiwankulu ababekhula ngentshiseko bamukela utshani. ”
Okusiletha namhlanje. Isikhathi lapho imfucuza, ukukhishwa nokusetshenziswa kwamandla kuyizinto ezinkulu ezikhathazayo ezingxenyeni eziningi zezwe, kepha sisachitha isikhathi, izinsizakusebenza, futhi $ 47.8 izigidigidi ngonyaka ezikhulayo nezinamazinyo eziluhlaza, izimpawu zesimo esiluhlaza.
Abanye abantu ezweni lonke nabo bayiqaphele imiphumela yezemvelo yokugcina utshani obuhle, kepha amalungu amaningi ale nhlangano ekhulayo ye “no mow” akhule abe yisithiyo esikhulu lapho bezama ukushintsha izindawo zabo zasekhaya.
Izifundazwe eziningi kanye nezifunda zinemithetho elawula ukuthi abaninikhaya bangaphatha kanjani amayadi abo, futhi eminingi yale mithetho ikhawulela kakhulu noma iyiphi indawo enganakekelwa kahle yotshani.
Ngokusho the Iphepha le-NRDCivula ifayela le-PDF , "Kuyo yonke i-United States, omasipala abaningi balawula ukuphakama okuphezulu kotshani endaweni ethile phakathi kwamasentimitha ayisishiyagalombili kuya kwayishumi nambili ngaphansi kwemithetho yabo ehluphayo."
Izinhlangano zabanini bamakhaya (HOAs) nazo zidlala indima enkulu ekunqandeni ukwehluka kwamagceke kuleli. Amanye amaqembu alinganisela ukuthi kufinyelela ku- Amakhaya angama-20%ivula ifayela le-PDF ezenhlangano zabaninikhaya, futhi eziningi zalezi zinhlangano zinemithetho eqinile yokubeka ingadi evumela kuphela utshani obenziwe ngamakhaza.
Le mithetho nemithetho ye-HOA iyinkinga yangempela kubantu abathanda USara Baker wase-Alexandria, e-Ohio oyeke ukugunda nokwenza i-acre yakhe yotshani ngomzamo wokuvuselela indawo yezitshalo zomdabu, izinambuzane nezilwane.
USarah Baker umi phakathi kwezitshalo ezisegcekeni lakhe elikhulile. U-Baker waphoqwa yidolobha lakhe ukuthi agunde igceke lakhe yize kwaba nemiphumela emihle ezilwaneni zasendle zasendaweni (Isithombe ngezilokotho ze-NRDC)
"Ezinyangeni ezintathu ngaphambili, ngangiyekile ukugunda cishe ihektare lami elilodwa lomhlaba ngaphandle kwedolobhana lase-Ohio." Wabhala uBaker endabeni yaseWashington Post mayelana negceke lakhe. “Imbiza yezitshalo yaqala ukuchuma, kwalandela izinhlobonhlobo zezinambuzane nezilwane. Nganginakho ngokuyisisekelo kukhule uhlelo lwezemvelo olusebenzayo, obekulindwe ithuba lokuthi livele. ”
Ngawo wonke umsebenzi wakhe onzima wokubuyisela isiqeshana somhlaba esimisweni semvelo semvelo, uBaker uthole isexwayiso esisemthethweni esibhalwe phansi esivela ebhodini labaphatheli belokishi lakhe elisongela inhlawulo ka- $ 1,000 uma engagundi utshani bakhe.
Lesi sipiliyoni sabiwe ngabantu abaningi kakhulu abazama ukwenza ushintsho oluhle lwezemvelo empahleni yabo.
Ngenhlanhla, akubona bonke omasipala abaqinile ngale mithetho yabo yokusetshenziswa komhlaba, kanti amanye amadolobha namadolobha asezindaweni ezomile anakho izinhlelo ezinikezela ngemali ebekiwe yabanini bemizi abafuna ukwenza ukuthi amagceke abo angachithi kakhulu.
Abantu abaningi ezweni lonke sebeqalile ukuhlehla baphikisana nemithetho ebekelwe imingcele yokusetshenziswa komhlaba, futhi bathole izindlela zokudala nezithakazelisayo zokwenza amagceke abo angachithi futhi abe nobungani emvelweni.
Eziningi zalezi zixazululo futhi ziyizindlela ezinhle zokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla akho kanye nokuchithwa kokungcola.
Enye indlela enhle yokunciphisa ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza kanye nezibulala-zinambuzane egcekeni lakho ukumane uyeke ukugunda nokunye ukukugcina. Lokhu kuzovumela igceke lakho ukuthi libuyele esimweni sasendle, semvelo esihle kakhulu ezilwaneni zasendle zasendaweni kanye nakumpova!
Ukuvumela utshani bakho, noma ngisho nezingxenye nje zotshani bakho, zikhule zasendle futhi kunciphisa noma kuqede ukusetshenziswa kwamanzi kanye ne-pesticide kanye nokukhishwa okuvela kumshini wokugunda utshani ophehlwa ugesi.
Kanye nezinye izinzuzo eziningi ezibalwe ngenhla, izingadi zemvula, ama-xeriscapes, futhi awekho amagceke e-mow nazo zonke izindlela ezinhle zokunciphisa udoti ukusetshenziswa kwamandla ekhaya. Zonke lezi zindlela ezingasetshenziswa egcekeni zidinga ukunakekelwa okuncane, okunciphisa isidingo samagundane otshani, ama-blower amaqabunga, neminye imishini yegceke esebenza ngegesi.
Amagceke adinga ukunakekelwa okuncane futhi anciphisa ukuncika ekusetshenzisweni kaningi kwezibulala-zinambuzane, imbewu entsha yotshani, nokuphakelwa kotshani, okuvame ukuhlanganiswa ngopulasitiki.
Njengoba kushiwo ngenhla, abaseMelika basebenzisa imali engama- $ 47.8 billion ngonyaka ukukhulisa utshani emagcekeni abo. Cabanga ngakho konke ukudla kwasendaweni okumnandi, okunomsoco ebesingakutshala ukube esikhundleni salokho besikhomba lezo zimali ekutshaleni imifino!
Ukukhulisa ingadi yemifino kuyinsizakusebenza enkulu futhi kungadinga ukusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane, kepha uma usuvele uhlela ukusebenzisa imali nezinsizakusebenza egcekeni lakho, kungani okungenani ungatholi inani elithile kuyo?
Imifino ekhulile futhi evuniwe inambitha kangcono kunalezo ezithengiwe ezitolo ezafuyelwa impilo yeshalofu futhi zivame ukuthunyelwa zivela kwezinye izifundazwe nakwamanye amazwe. Ngokwengeziwe, ukusebenzisa izinsizakusebenza zakho zasegcekeni ukutshala ukudla kunganciphisa ne-carbon footprint yakho ngokufaka ukudla kwesuphamakethe ngokwakho.
Uma ukhetha ukutshala imifino, futhi yisikhathi esihle sokuqala Umquba ukubenza bakhule ngempumelelo enkulu.
Ungasho ukuthi ingadi ikukhuthaza ukuthi udle imifino eminingi, kunezinzuzo ezifakazelwe ngokwengqondo, futhi kuyindlela enhle yokuzivocavoca umzimba!
Utshani lwe-organic luyindlela enhle kubantu abasafuna ukugcina ukubukeka nokuzwakala okuyisisekelo kotshani bendabuko, noma abangahle babe nentshisekelo yokwenza ushintsho oluncane emikhubeni yabo yokusebenzisa umhlaba. Le nketho ingakhanga kakhulu kulabo abanezingane ezithanda ukudlala ibhola egcekeni, noma abantu abangahlali eduze kwepaki noma indawo ejwayelekile eluhlaza.
Empeleni kulula ngokumangazayo ukuba notshani obuhle ngaphandle kokusebenzisa izibulala-zinambuzane. Kukhona nezinhlangano ezithile zasenyakatho-mpumalanga, njenge IKomidi Lamanzi Esiphepho Somfula i-Connecticut futhi Iphrojekthi Yomhlaba Ophelele, ezinikeza ngemibhalo yokuqondiswa kokuthi ungayiguqula kanjani utshani bakho bube semvelo.
Enye indlela yokwenza utshani bakho bube nobuhle nakakhulu ukusebenzisa umshini wokugunda utshani. Le mishini esebenzisekayo izosika utshani bakho ngaphandle kwegesi ebabazekayo futhi iyindlela enhle yokusiza ukunciphisa ukusebenzisa kwakho amandla!
Ukwakha ingadi yemvula endaweni yakho kuyindlela enhle yokuvimbela ukugeleza kwamanzi nokunciphisa ukungcoliswa kwamanzi endaweni, ikakhulukazi uma wena hlala eduze nolwandle. Futhi zenziwe izandla uma sezakhiwe, futhi azidingi izinsizakusebenza eziningi zokwakha noma ukunakekela!
Hlola Umhlahlandlela we-EPA ukuthola amathiphu amaningi wokuthi ungayiguqula kanjani ingadi yakho yemvula ihambisane nemvelo yakho yangakini.
Izingadi zemvula zisiza ukuhlunga ukugeleza okungaba yingozi ngokuyikhuthaza ukuthi ingene emhlabathini. Lolu hlobo lwe-landscape nalo ludinga ukunakekelwa okuncane kakhulu okunciphisa ukusetshenziswa kwemfucuza namandla.
Xeriscaping kuyindlela yokulungisa ingadi elwela ukunciphisa noma ukuqeda isidingo sokunisela. AmaXeriscapes athandwa kakhulu emazweni asomile asentshonalanga, kepha angakhiwa kunoma yisiphi isifunda noma isimo sezulu.
Funda kabanzi ngemigomo eyi-7 ye-xeriscaping lapha!
Amagceke e-Xeriscaped afaka izitshalo zasendaweni futhi adinga ukunakekelwa okuncane
Uma unentshisekelo yokufunda kabanzi ngesihloko hlola iphepha le-NRDC lapha.ivula ifayela le-PDF
Ungahlola futhi isitolo sethu sezinto zokwakha esibuyile, Izidingo ze-EcoBuilding, ukuthola amadili ku- ukulungisa amathuluzi namathuluzi wokunakekela amagceke njengama-rakes, imiphongolo yemvula, ama-compost elanga, nokuningi!
Uma unentshisekelo yokuthola ezinye izindlela zokusimama ekhaya, funda ukuthi i-CET ingakusiza kanjani ukunciphisa imfucuza futhi konga amandla!
Septemba 23rd, i-2021 | 0 Amazwana
Septhemba 9th, 2021 | 0 Amazwana
Juni 25th, 2021 | 0 Amazwana